Apple waxay sii daysay iOS 15.2, iPadOS 15.2, watchOS 8.3, macOS 12.1, iyo tvOS 15.2 oo wata Badbaadada Isgaadhsiinta, Xiriirada Dhaxalka ah, iyo in ka badan | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Apple waxay sii daysay iOS 15.2, iPadOS 15.2, watchOS 8.3, macOS 12.1, iyo tvOS 15.2 oo wata Badbaadada Isgaarsiinta, Xiriirada Dhaxalka ah, iyo in ka badan
Apple waxay sii daysay iOS 15.2, iPadOS 15.2, watchOS 8.3, macOS 12.1, iyo tvOS 15.2 oo wata Badbaadada Isgaarsiinta, Xiriirada Dhaxalka ah, iyo in ka badan
Apple waxa ay ka shaqaynaysay cusboonaysiinta soo socota ee iOS 15 iyo iPadOS 15 in muddo ah hadda. Taas oo macnaheedu yahay inaan la shaqaynaynay noocyo kala duwan oo abuurka beta ah labadii bilood ee la soo dhaafay ama wax ka badan. Laakiin, hadda shirkadu waxay diyaar u tahay sii deynta dadweynaha.
Maanta waa maalintii! Apple ayaa ugu dambeyntii diyaar u ah cusbooneysiinta dadweynaha ee iOS 15.2 iyo iPadOS 15.2. Kuwani waa casriyeyn bilaash ah oo loogu talagalay nidaamyada hawlgalka mobilada, si la mid ah koorsada. Si loo cusboonaysiiyo, waxa jira dhawr ikhtiyaar oo kala duwan. Waxaad geli kartaa app Settings, ka dibna dooro General -> Cusbooneysiinta Software oo raac tilmaamaha shaashadda si aad u hesho software cusub oo la soo dejiyo oo la rakibo.
Ama, waxaad shidi kartaa Cusbooneysiinta Toos ah oo u dayn kartaa qalabkaaga(yada) inay maraan habsocodka cusboonaysiinta hal habeen, inta ay ku xidhan yihiin.
Laakiin maxaa cusub?
IOS 15.2 iyo iPadOS 15.2 kuma daraan waxyaabo badan oo cusub isku darka, laakiin waxaa jira qaar cusub oo muhiim ah oo lagu daro. Waa kan sida ugu dhaqsaha badan ee ku saabsan waxa ku cusub iOS 15.2:
iOS 15.2 ayaa ku daraya Farriimaha Amniga Isgaarsiinta, kaas oo lagu dhex dhisay abka fariimaha ee goobahaas, waxayna u adeegtaa inay bixiso digniinaha sawirada suurtogalka ah ee cad ee lagu wadaago abka. Carruurta iyo waalidkaba waa la ogaysiin doonaa walxahaas khatarta ah. Digniinahaas waxaa la soo saari doonaa marka sawirka la wadaago ilmaha ama laga soo diro qalabka ilmaha.
IOS 15.2 waxa ay ku daraysaa awooda in si dhakhso ah loo arko liiska maxaa la hagaajiyay iyo/ama la bedelay Qalabkaaga, oo ay ku jiraan baytariyada, bandhigyada, iyo in ka badan.
Warbixinta Qarsoonnimada App hadda waxaa laga heli karaa iOS 15.2 iyo iPadOS 15.2. Tani waxay u oggolaanaysaa isticmaalayaasha inay arkaan inta jeer ee abka ay gelayaan xog xasaasi ah oo kala duwan oo ku salaysan oggolaanshaha isticmaaluhu oggolaaday. Taas waxaa ku jira kamarada, goobta, iyo qaar kaloo badan.
iOS 15.2 wuxuu ku darayaa taageerada Xiriirada Dhaxalka ah, taas oo u oggolaan doonta qof inuu ku dhawaaqo shakhsiyaadka inay yihiin kuwa heli kara "dhaxalka dhijitaalka ah" ee qof dhintay.
Software-ka cusub wuxuu taageerayaa sifo cusub oo ku jirta abka Find My app oo loo yaqaan "Walxaha Iga Daba-galka kara” Tani waxay u oggolaanaysaa isticmaalayaasha inay si dhakhso ah u arkaan haddii shay raadiyaha, sida Apple AirTag, uu u dhow yahay iyaga - xitaa haddii aanay kooda ahayn.
IOS 15.2 waxa ay ku darsataa beddelka u go'an ee abka kamarada si ay u shido ama u damiso Habka sawir qaadista.
Mid ka mid ah kordhinta cusub: Apple ayaa sidoo kale sii daayay Qorshaha Codka Muusiga ee Apple ikhtiyaarka maanta sidoo kale. Tani waxay u ogolaanaysaa macaamiisha inay iska diiwaan galiyaan Apple Music kaliya $4.99 bishii, iyadoo si buuxda ay u helaan dhammaan buugaagta muusigga, liiska heesaha, iyo saldhigyada. Si kastaba ha ahaatee, qorshuhu wuxuu la shaqeeyaa Apple's Siri kaaliyaha codka.
Cusbooneysiin muhiim ah, xitaa haddii aysan ahayn mid macaan oo ay ka buuxaan koox horay u wajaheysa isbeddello cusub.
Apple waxay sii deysay macOS Monterey 12.1 maanta sidoo kale. Iyadoo taas, Apple ugu dambeyntii keenaya SharePlay nidaamka hawlgalka desktop sidoo kale.
Apple sidoo kale wuxuu siidaayay watchOS 8.3 dadweynaha sidoo kale. Si loo cusboonaysiiyo, Apple Watch-ga u-qalma waa inuu lahaadaa ugu yaraan 50% nolosha batteriga, lagu xidhaa dabaysha, oo lagu xidhaa iPhone-ka. Cusboonaysiinta tooska ah ayaa soo dejin doonta oo ku rakibi doonta software-ka cusub habeen dhaxe marka Apple Watch lagu xidho dabaysha. Milkiilayaasha sidoo kale waxay furi karaan Watch app, taabo Guud ahaan -> Cusbooneysiinta Software oo raac tilmaamaha shaashadda si aad u cusbooneysiiso software-ka cusub.
Apple sidoo kale wuxuu siidaayay tvOS 15.2 dadweynaha sidoo kale.
IOS 15.2 Changelog (waa doozy)
IOS 15.2 waxa uu ku darayaa Apple Music Voice Plan, heer cusub oo isdiiwaangelin kaas oo siiya marin u helka muusiga iyadoo la adeegsanayo Siri. Cusboonaysiintan waxa kale oo ka mid ah Warbixinta Qarsoonnimada App-ka, sifooyinka cusub ee badbaadada carruurta iyo waalidka ee fariimaha, iyo sifooyin kale iyo hagaajinta cilladaha iPhone kaaga.
Qorshaha Codka Muusiga ee Apple
Qorshaha Codka Muusiga ee Apple waa heer cusub oo isdiiwaangelin kaas oo ku siinaya marin u helka dhammaan heesaha, liisaska-ciyaaraha, iyo saldhigyada Apple Music adoo isticmaalaya Siri
Just Weydii Siri waxay soo jeedinaysaa muusig ku salaysan taariikhdaada dhegaysi iyo waxaad jeceshahay ama waxaad neceb tahay
Dib u ciyaar mar kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad gasho liiska muusiga aad dhawaan ciyaartay
Warbixinta Khaaska ah ee App-ka ee ku jirta Settings ayaa kuu ogolaanaysa inaad aragto inta jeer ee abka ay galeen goobtaada, sawirada, kamarada, makarafoonka, xidhiidhada iyo wax ka badan todobadii maalmood ee la soo dhaafay, iyo sidoo kale hawsha shabakadooda
Goobta badbaadada isgaadhsiinta waxay siisaa waalidiinta awooda inay awood u siiyaan digniinaha carruurta marka ay helaan ama soo diraan sawiro ay ku jiraan qaawan
Digniinaha badbaadada waxaa ku jira agab waxtar u leh carruurta marka ay helaan sawirro ay ku jiraan qaawanaan
Hagitaan la balaariyay gudaha Siri, Spotlight iyo Raadinta Safari si looga caawiyo carruurta iyo waalidiinta inay ammaan ku joogaan khadka oo ay u helaan caawinta xaaladaha ammaanka
Legacy Dijital ah waxay kuu ogolaanaysaa inaad dadka u magacowdo Xiriirada Dhaxalka ah si ay u galaan akoonkaaga iCloud iyo macluumaadka shakhsi ahaaneed haddii ay dhacdo geeri.
Xakamaynta sawirka Macro si loogu beddelo lenska Ultra Wide si loo qabto sawirrada macro iyo fiidiyowyada waxaa lagu awoodsiin karaa Settings-ka iPhone 13 Pro iyo iPhone 13 Pro Max
Dukaanka tab wuxuu kuu ogolaanayaa inaad wax ka baadho, iibsatid, oo aad kireysato filimada iyo bandhigyada TV-ga dhammaan hal meel
Khariidadda magaalada oo la xoojiyey oo ku jirta Khariidadaha Apple oo leh tafaasiisha waddooyin sida jidadka leexashada, dhex-dhexaadinta, jidadka baaskiilka, iyo jidadka dadka lugeeya ee magaalooyinka la taageero
Siidayntan waxa kale oo ka mid ah waxyaabaha soo socda ee wanaajinta iPhone kaaga:
Qari iimaylkaygu wuxuu ku jiraa abka boostada ee iCloud+ macaamiisha si ay u abuuraan ciwaanno iimaylo gaar ah oo random
Find My waxay heli kartaa iPhone ilaa shan saacadood marka kaydka Korontada
Kaydyadu waxay kuu oggolaanayaan inaad u aragto lacagta calaamadeeyaha oo aad aragto waxqabadka sanad-ilaa-taariikheedka marka aad daawato jaantusyada
Xusuusin iyo Qoraallada hadda waxay kuu oggolaanayaan inaad tirtirto ama dib u magacowdo calaamadaha
Siidayntan waxa kale oo ka mid ah hagaajinta cayayaanka ee iPhone kaaga:
Sawirrada ProRAW waxa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo si xad dhaaf ah u muuqda marka lagu arkayo abka tafatirka sawirka qolo saddexaad
Muuqaallada HomeKit oo ay ku jiraan albaabka garaashka waxaa laga yaabaa inaysan ka socon CarPlay marka iPhone-kaagu xiran yahay
Waxaa laga yaabaa in CarPlay aysan cusboonaysiin Macluumaadka Ciyaarta ee abka qaarkood
Tilmaamaha qaar ayaa laga yaabaa inaan laga heli karin dhammaan gobollada ama dhammaan aaladda Apple. Macluumaadka ku saabsan waxyaabaha ku jira amniga cusboonaysiinta software -ka Apple, fadlan booqo degelkan:
Cusbooneysii ugu dambeysay hadda waa la heli karaa
Dejinta Ololaha Raadinta Dhaqdhaqaaqa ee Xayeysiiska Google